डिजाइन, निर्माण, नियम र खेल को सबै प्रकार को समीक्षा - Ikkaro
सबैलाई खेल मन पर्छ। र एक राम्रो बोर्ड खेल हुक। यदि तपाईं एक गेमर हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई यो सेक्सन मनपर्नेछ। म एक साधारण प्रशंसक हुँ जसले हरेक पटक धेरै भन्दा धेरै चीजहरू कोसिस गर्दछ।
विचार खण्डलाई धेरै भागमा विभाजन गर्नु हो। एक तर्फ, मँ परीक्षण गर्दै छु कि खेलहरु को एक समीक्षा, अर्कोतर्फ, खेल को सृष्टि र अन्तमा तिनीहरूको निर्माण, प्रतिलिपि, भाग को निर्माण, के सामग्री प्रयोग, आदि। खेलबाट सबै DIY।
अहिले जहाँ मसँग सबै भन्दा अनुभव छ सामग्री र छनौट गर्ने तत्वहरूको लागि निर्माण प्रविधिहरू जुन विस्तार गर्न, सिर्जना गर्न वा खेल परिवर्तन गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
थप रूपमा, त्यहाँ इतिहास, नियमहरू, सूचना र बोर्डहरू, टुक्राहरू, इत्यादि निर्माण गर्न को लागी हामीले छुट्याएका विभिन्न खेलहरूको क्लासिक्स चेस, ब्याकगेमन, मानकला, अनलाइन पजलहरू देखि आधुनिक आधुनिकसम्म कोठा हुनेछ। जसलाई
को लागी विशेष खण्ड प्रिन्ट र प्ले गर्नुहोस् ;-)
बाहिरी कार्यक्रम र पार्टीहरूका लागि पारंपरिक काठका खेलहरू
मैले यस बर्षमा दुई पटक भेटिसकें क्लासिक खेलहरू र गाउँ उत्सवहरूमा घटनाहरूको समयमा बच्चाहरूको लागि सवारी गतिविधि। तिनीहरू काठबाट बनेका खेलहरू हुन्, धेरै आधारभूत र साधारण चीजहरू तर उनीहरू तिनीहरूलाई मन पराउँछन्। केहि एक्लै खेल्न र अरूहरू जोडीमा वा टीमको रूपमा
गर्मीका लागि केटीहरू र भतिजाहरूसँग खेल्न सक्षम हुन म माउन्ट गर्न चाहन्छु, वनको फाइदा उठाउँदै जुन हामीसँग छ जुन बाहिरबाट भइरहेको छ। यो लेख ती तस्वीरहरूको संकलन हो जुन मैले फोटोहरू लिनको लागि सक्षम पारें र ती सम्झनाहरू। एक दिन त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू थिए जुन मैले फोटोहरू लिन सकीन। सबै खेलहरूमा हामी दुवै नियमहरूको र निर्माणमा भिन्नताहरूको भिन्नताहरूको एक समूह गर्न सक्दछौं। नोटहरू एक अनुस्मारकको रूपमा छन्।
तपाईं यी सबैको साथ राम्रो जिमखाना लिन सक्नुहुन्छ। म खेलहरू २ मा छुट्याउँछु, ती सीपको र ती मोटर र सन्तुलन गतिविधिहरू हुन्।
जेन्गा नियम (जेन्गा कसरी खेल्ने)
Jenga यो wooden 54 काठका ब्लकहरूसँग खेल्दछ, जसको लम्बाइ तिनीहरूको चौडाइको times गुणा हुन्छ। ब्लकहरू टावरको रूपमा स्ट्याक्ड छन्। प्रत्येक फ्लोरमा तीन ब्लक हुन्छन्, र माथिल्लो फ्लोर लम्बवत राखिन्छ। यसैले अन्तमा त्यहाँ १3तला छन्। तर यो एक छवि संग धेरै राम्रो देखिन्छ।
यदि तपाइँ खेल पक्कै मनपर्दछ भने तपाईलाई बास्याक पनि मनपर्दछ
एक पटक टावर निर्माण भएपछि, धरहरा निर्माण गर्ने व्यक्तिले खेल सुरु गर्दछ। यहाँ आन्दोलनहरू कुनै पनि भुइँबाट ब्लक लिने र यसलाई सफा टावरको शीर्षमा राख्नु समावेश गर्दछ। ।
प्रिन्ट र प्ले, बोर्ड खेल निर्माण र DIY संस्कृति
केही हप्ता पहिले ट्वीटरमा मैले टिप्पणी गरे कि उनीहरूले मलाई भेटे प्रिन्ट र प्ले को कला, र त्यसबेलादेखि म केहि अनुसन्धान गर्दै छु यस संसारले के प्रस्ताव गर्दछ र यदि यसलाई चाखलाग्दो छ यसमा जोड्न खेल खण्ड
प्रिन्ट र प्ले म सामान्य मा बोर्ड खेल को निर्माण को लागी पारित गरेको छ र म प्रेम मा गिर, म यो कल्पना गरेन बोर्ड खेलहरूमा DIY लाई समर्पित यसको आफ्नै ब्रह्माण्ड हुन्छ।
के कुराले मलाई सबैभन्दा धेरै अचम्मित पार्‍यो भन्ने हो कि मानिसहरुसँग टुक्राहरू बनाउँदा ठूलो संख्यामा प्रश्न र शंकाहरू छन् जुन म समाधान गर्न सक्षम छु / / वा सल्लाह दिन सक्षम छु। सस्तो सामग्रीका साथ टुक्राहरू सिर्जना गर्नुहोस्, बिभिन्न सामग्रीहरू आदि काम गर्नुहोस्। म लामो समयदेखि यी सबैको बारेमा पढ्दै र लेख्दै छु, तपाईंले केवल यसलाई लागू गर्नुपर्दछ बोर्ड खेल सिर्जना.
रुबिकको घन २ × २ बच्चाहरूले बनाउने
केही हप्ता अघि, डेभिड, एक एलिमेन्टरी स्कूलका शिक्षकले मलाई उनीहरूलाई मद्दत गर्न सक्छु कि भनेर सोधे बच्चाहरूको लागि २ × २ रुबिकको घन डिजाइन.
तिनीहरू एक बनाउन चाहन्थे रुबिकको घन वरपर बच्चाहरूको लागि गणित परियोजना । मैले उनलाई तुरून्तै निर्माण गर्न आईटमहरू पठाएँ पासा संग चुम्बकीय रुबिकको क्युब्स, the2×2र3×3तर तिनीहरूको आवश्यकता फरक थियो र तिनीहरू साधारण परिसरको साथ आएका थिए।
१० बर्षका बच्चाहरूले यसलाई निर्माण गर्न सक्षम हुनुपर्दछ, त्यसैले हामी विस्तृत र खतरनाक उपकरणहरू र प्रक्रियाहरू बिर्सन्छौं
र यो सस्तो हुनुपर्दछ, धेरै सस्तो
जे होस् सबै कुरा भन्नु पर्छ, तिनीहरू केवल एक न्यूनतम कुशलतापूर्वक घन चाहन्थे।
मेरो समाधान यो हो २ × २ रुबिकको कार्डबोर्ड र चुम्बकीय कागजको घन र यदि तपाइँ एक वर्गको लागि गर्नुहुन्छ यसको लागत प्रति घन लगभग € १. cost लाग्नेछ, यदि तपाइँ केवल एक गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाइँ € or वा € to मा जान सक्नुहुन्छ।
Be ईट्सको ईन्ग्ग्मा जुन १००० हुन चाहन्छ
हामीले लामो शुक्रबारमा पहेलियां, पहेलाहरू, खेलहरू वा मस्तिष्क टीज़रहरू पोस्ट गर्न रोकेका छौं। यो सजिलो हुनुपर्दछ किनकि ... पढ्न जारी राख्नुहोस्
3 को घटाउको दुष्ट ईन्ग्मा
र तपाइँको लागि एक राम्रो सप्ताहन्तको लागि म तपाईंलाई यो सानो गणितीय पञ्जा छोड्छु कि यद्यपि यो गाह्रो छैन ... पढ्न जारी राख्नुहोस्
कसरी 1x2x3 रुबिक क्यूब बनाउने
रुबिकको क्यूब ह्याक एक 3x2x1 घनको साथ खेल्न सक्षम हुन यो धेरै छ, धेरै चाखलाग्दो, Hehi।
पासाको साथ कसरी चुम्बकीय रुबिकको घन बनाउने
तिमीलाई यो मन पर्छ पासाको साथ बनेको चुम्बकीय रुबिकको घन?
ठीक छ, यो गरेको भन्दा यो सजिलो देखिन्छ ...
एमआईटी - लकपिकिंग बाइबिल
हामी एमआईटीको अनुवाद संलग्न गर्दछौं, कागजातलाई रूपमा लक लक बाइबल।
जे होस् यदि तपाईं केहि मन पराउनुहुन्छ अझ राम्रो लाग्दछ भने, यो हो अपरिहार्य कागजात को लागि लकमाथिको लागि दीक्षा। यो मेरो ध्यान आकर्षण गर्ने विषय हो। यदि तपाईं लकस्मिथको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ भने यो पूर्ण रूपमा स्वीकार गरिएको छ, तर यदि शब्द लकपिकि appears देखिन्छ भने यस्तो लाग्छ कि तपाईंले अपराध गरिरहनु भएको छ। तर हामी यस बारे अर्को दिन कुरा गरौं ;-)
यस कागजातको साथ तपाईं सिक्नुहुनेछ
फर्म पल्स खेल
आज संयोगले मैले ईएसओ डिजाईन र टेक्नोलोजीमा मेरो पुस्तक अकेला एडिसिओनेसबाट जेम्स ग्याराटको भेट्टाए। ... पढ्न जारी राख्नुहोस्
प्रिन्ट र प्ले गर्नुहोस्